27th August 2019, 05:32 pm | १० भदौ २०७६
डा. राजु अधिकारी -
लगभग विगत दुई सातादेखि केन्द्र बिन्दुमा रहेको शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरण र रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको अन्यौलले अहिले एउटा निकास पाएको छ। यो निकास अस्थायीमात्रै हो। केही समयको लागि यो विषय अलि सुस्ताउने छ। वास्तविक दोषीहरु पछि पहिचान हुँदै जालान्। त्यहीअनुसार कारवाही पनि हुँदै जाला। तर, जे भए पनि रविका समर्थक हुन् या विरोधी, सायद दुवैले यसलाई आफ्नो जित भएको भन्नेछन्। र, त्यसै अनुरुप व्याख्या पनि गर्नेछन्।
बहुमतको सरकार छ, पाँच 'वर्ष त ढुक्कसँग मोज गर्न पाइहालिन्छ' भनेर बस्ने स्थिति छैन। कहिले ननासिने जहाँनीया राजतन्त्र त जनताले फाले भने जाबो पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार जनताले ढाल्न चाहे भने पाँच दिन पनि लाग्ने छैन। त्यसैले जनताको आशा र आकांक्षालाई वास्ता नगरेर आफ्नो र दलका कार्यकर्ताको मात्र दुनो सोझ्याउन लाग्यौ भने यौटा मात्र हैन, सयौं रविहरु जनताले जन्माउने छन्। र, त्यतिबेला राज्य सत्तामा तिमीहरु होइन तिनै नयाँ जन्मेका रविहरु हुनेछन्।
यस प्रकरणले गर्दा सामाजिक संजालमा एउटा कुरोले निकै चर्चा पनि पायो - यदि कसैले ओली, प्रचण्ड या देउवालाई किटानी गरेर आत्महत्या गर्‍यो भने के गर्ने? त्यसै पनि यी तीनजना मात्र होइन, नेपालका सबैजसो अनैतिक र अदुरदर्शी नेताहरुका कारण देशमा गरिबी, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भएर कतिले आत्महत्या गरेका होलान्? त्यसो भए, आत्महत्या दुरुत्साहनमा यी नेताहरुलाई कारवाही हुने कि नहुने? त्यसैले एक वर्षसम्म लागू गरिसकेपछि यस कानुनका त्रुटिहरु पनि बाहिर आइसकेका छन्। तर, त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्ने रवि प्रकरणले देखाएको छ।